musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Zvatinoziva nezveCOVID-19 Omicron: Mutungamiri Anotsanangura
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Mutungamiri weRepublic of South Africa VaCyril Ramaphosa ndivo mukuru wenyika uye mukuru wehurumende yeRepublic of South Africa. Mutungamiri anotungamira bazi guru rehurumende uye ndiye mukuru-mukuru weSouth African National Defence Force.
Nhasi akagadziridza Vanhu vekuSouth Africa nepasirese pamamiriro ari kubuda pane Omicron musiyano weCOVID-19.
Mutungamiri Cyril Ramaphosa Chirevo:
Vamwe Vangu vekuSouth Africa,
Kutanga svondo rino, masayendisiti edu akacherechedza mutsva mutsva wekoronavirus inokonzera chirwere cheCOVID-19. Sangano reWorld Health Organisation rakaritumidza zita rekuti Omicron uye rakazivisa kuti 'mutsauko wekunetseka'.
Musiyano weOmicron wakatanga kutsanangurwa muBotswana uye muSouth Africa, uye masayendisiti akacherechedzawo nyaya dziri munyika dzakaita seHong Kong, Australia, Belgium, Italy, United Kingdom, Germany, Austria, Denmark, neIsrael.
Kuzivikanwa kwekutanga kwemusiyano uyu mhedzisiro yebasa rakanakisa rakaitwa nemasayendisiti edu muSouth Africa uye mhedzisiro yakananga yekudyara kwakaitwa neMadhipatimendi edu eSainzi neInnovation uye Hutano mukugona kwedu kuongorora genomic.
Isu tiri imwe yenyika dzepasi rose dzakamisikidza network yekutarisa munyika yese kutibatsira kutarisa maitiro eCCIDID-19.
Kuonekwa kwekutanga kweichi musiyano uye basa rakatopinda mukunzwisisa zvimiro zvayo uye zvinogona kuitika zvinoreva kuti isu takashongedzerwa zvirinani kupindura kune musiyano.
Tinopa rukudzo kune masayendisiti edu ese ane mukurumbira pasi rose uye anoremekedzwa zvakanyanya uye vakaratidza kuti vane ruzivo rwakadzama rwechirwere chechirwere.
Pane zvinhu zvakati wandei zvatinotoziva nezve musiyano semugumisiro webasa resainzi redu rave kuita pakuongorora genome.
Chekutanga, isu tave kuziva kuti Omicron ine zvakawanda shanduko kupfuura chero yapfuura musiyano.
Kechipiri, isu tinoziva kuti Omicron inoonekwa zviri nyore neazvino COVID-19 bvunzo.
Izvi zvinoreva kuti vanhu vari kuratidza zviratidzo zveCCIDID-19 kana vanga vachisangana nemunhu ane COVID-19, vanofanira kuramba vachiongororwa.
Chechitatu, tinoziva kuti mutsauko uyu wakasiyana nemamwe akasiyana anotenderera uye kuti hauna hukama zvakananga neDelta kana Beta akasiyana.
Chechina, tinoziva kuti musiyano uyu ndiwo unokonzera zvirwere zvakawanda zvakawanikwa muGauteng mumasvondo maviri apfuura uye zvave kuonekwa mune mamwe matunhu ese.
Pachine zvinhu zvakawanda pamusoro pekusiyana izvo zvatisingazivi, uye izvo masayendisiti muSouth Africa uye kune dzimwe nzvimbo pasi rose achiri kushanda nesimba kuti atange.
Mumazuva mashoma anotevera nemavhiki, sezvo data rakawanda rinowanikwa, tichava nekunzwisisa kuri nani kwe:
kana Omicron ichipfuudzwa zviri nyore pakati pevanhu,
kana zvichiwedzera njodzi yekutapukirwazve,
kana musiyano unokonzera chirwere chakanyanya, uye,
inoshanda sei majekiseni azvino anopesana nemusiyano weOmicron.
Kuzivikanwa kweOmicron kunopindirana nekusimuka kwakangoerekana kwaita hutachiona hweCOVID-19.
Kuwedzera uku kwakanangana neGauteng, kunyange hazvo nyaya dziri kuramba dzichikwira mumamwe matunhu.
Isu takaona avhareji ye1,600 makesi matsva mumazuva manomwe apfuura, zvichienzaniswa nemazana mashanu emazuva ese kesi musvondo rapfuura, uye mazana maviri nemakumi manomwe neshanu emazuva ese svondo rapfuura.
Huwandu hweCCIDID-19 bvunzo dzine hutano hwakwira kubva pazvikamu zviviri kubva muzana kusvika papfumbamwe muzana mukati meisingasviki svondo.
Uku kukwira kwakanyanya kwehutachiona munguva pfupi.
Kana nyaya dzichiramba dzichikwira, tinogona kutarisira kupinda muchikamu chechina chezvirwere mukati memavhiki mashoma anotevera, kana pasina nguva pfupi.
Izvi hazvifaniri kuuya sechishamiso.
Epidemiologists uye vatevedzeri vezvirwere vakatiudza kuti tinofanira kutarisira wave wechina kutanga kwaZvita.
Vesainzi vakatiudzawo kuti titarisire kubuda kwezvinhu zvitsva zvakasiyana.
Pane zvakati wandei zvinonetsa nezve Omicron musiyano, uye isu hatisati tanyatso ziva kuti zvichafamba sei kuenda kumberi.
Zvisinei, tatova nemidziyo yatinoda kuti tizvidzivirire pairi.
Isu tinoziva zvakakwana nezve musiyano wekuziva zvatinofanira kuita kuderedza kutapurirana uye kuzvidzivirira kubva kuchirwere chakakomba nerufu.
Chekutanga, chine simba kwazvo, chishandiso chatinacho kubayisa.
Kubva majekiseni ekutanga eCCIDID-19 avapo kupera kwegore rapfuura, takaona kuti vaccine vakaderedza sei kurwara kwakanyanya, kuchipatara, uye kufa muSouth Africa nepasirese.
Mishonga inoshanda. Majekiseni ari kuponesa hupenyu!
Kubva patakatanga chirongwa chedu chekubaya veruzhinji muna Chivabvu 2021, mishonga inodarika miriyoni makumi maviri neshanu yakapihwa muSouth Africa.
Uku kubudirira kunoshamisa.
Ndiko kupindira kwakanyanya kwehutano kunoitwa munyika ino munguva pfupi yakadaro.
Zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvevanhu vakuru vakawana mushonga mumwe chete, uye 35.6 muzana yevanhu vakuru vekuSouth Africa vanobaiwa zvizere nhomba yeCOVID-19.
Sezvineiwo, zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vane makore 57 zvichikwira vanobayiwa nhomba yakakwana, uye chikamu che60 muzana chevanhu vane makore ari pakati pemakumi mashanu nemakumi matanhatu vanobaiwa.
Kunyangwe iyi iri budiriro inogamuchirwa, hazvina kukwana kutigonesa kuderedza utachiona, kudzivirira kurwara nerufu uye kudzoreredza hupfumi hwedu.
Kudzivirira COVID-19 mahara.
Manheru ano ndinoda kudaidza munhu wese asina kubaiwa nhomba kuti aende kunzvimbo yekubaira iri pedyo pasina kunonoka.
Kana paine mumwe wemumhuri menyu kana pakati peshamwari dzenyu asina kubaiwa, ndinodaidza kwamuri kuti muvakurudzire kubayiwa.
Vaccination ndiyo nzira inonyanya kukosha yekuzvidzivirira iwe nevaya vakakukomberedza kubva kuOmicron musiyano, kuderedza kukanganiswa kwechina wave uye kubatsira kudzoreredza rusununguko rwemagariro atinoshuvira tese.
Vaccination kwakakoshawo kuti hupfumi hwedu hudzoke kushanda zvizere, kutangazve kufamba, uye kudzoreredza kwezvikamu zviri munjodzi sekushanya nekugamuchira vaeni.
Kuvandudzwa kwemishonga yekudzivirira yatinayo kurwisa COVID-19 yakaitwa nekuda kwemamirioni avanhuwo zvavo vakazvipira kutora chikamu mumiyedzo iyi kusimudzira ruzivo rwesainzi kuitira kubatsira kwevanhu.
Ndivo vanhu vakaratidza kuti majekiseni aya haana njodzi uye anoshanda.
Vanhu ava magamba edu.
Vanobatana nevakuru vevashandi vehutano vanga vari pamberi mukurwisa denda kwemakore maviri, uye vanoramba vachichengeta vanorwara, vanoramba vachivapa vaccine, uye vanoramba vachiponesa hupenyu.
Tinofanira kunge tichifunga nezvevanhu vakashinga kana tichifunga kubaiwa.
Nekubaiwa nhomba, hatisi kungozvidzivirira chete, asi tiri kuderedzawo kudzvanyirirwa kuhurongwa hwedu hwehutano uye vashandi vedu vehutano uye kuderedza njodzi dzinotarisana nevashandi vedu vehutano.
South Africa, sedzimwe nyika dzinoverengeka, iri kutarisa majekiseni ekukurudzira vanhu vari panjodzi huru uye avo booster inogona kubatsira.
Vashandi vezvehutano mukutongwa kweSisonke, vazhinji vavo vakabaiwa nhomba inodarika mwedzi mitanhatu yapfuura, vari kupihwa madosi ekuwedzera eJohnson & Johnson.
Pfizer yakaisa chikumbiro kuSouth Africa Health Products Regulatory Authority yekuti dosi rechitatu ripiwe mushure meiyo madosi maviri ekutanga.
Komiti yeMinister Advisory on Vaccines yakatoratidza kuti ichakurudzira kusuma kwaita mabooster kutanga nevanhu vakuru.
Vamwe vanhu vane immunodeficiency, sevaya vari kurapwa kenza, renal dialysis, uye pane steroids kurapwa kweauto-immune zvirwere, vanobvumirwa booster doses pakurudziro yavanachiremba vavo.
Sevanhu, semakambani, uye sehurumende, tine basa rekuona kuti vanhu vese munyika muno vanokwanisa kushanda, kufamba uye kushamwaridzana zvakachengeteka.
Naizvozvo tanga tichiita kudyidzana nevadyidzani nevamwe vane chekuita nekuunza matanho anoita kuti vaccine ive mamiriro ekuwana nzvimbo dzebasa, zviitiko zveveruzhinji, zvifambiso zveveruzhinji, uye nzvimbo dzeveruzhinji.
Izvi zvinosanganisira nhaurirano dzanga dzichiitwa paNEDLAC pakati pehurumende, vashandi, vemabhizimisi, pamwe nenharaunda, apo pane kuwirirana kukuru panyaya yekuti panofanirwa kuitwa matanho akadai.
Hurumende yakamisa boka rebasa richaita hurongwa hwekubvunzurudza pamusoro pekuita kuti vajekiseni isungirwe kuita zviitiko nenzvimbo.
Boka rinoona nezvemajekiseni richamhan'ara kuKomiti yeMakurukota pamusoro peBaccination inotungamirwa neMutevedzeri weMutungamiriri weNyika, iyo ichapa mazano kuCabinet pamusoro penzira yakanaka uye inoenderera mberi yezvisungo zvejekiseni.
Tinoona kuti kuiswa kwezviyero zvakadaro inyaya yakaoma uye yakaoma, asi kana tikasagadzirisa izvi zvakanyanya uye sekukurumidzira, ticharamba tichinetseka kune zvitsva zvakasiyana-siyana uye ticharamba tichitambura nemafungu matsva ehutachiona.
Chishandiso chechipiri chatinofanira kurwisa mutsauko mutsva ndechekuramba takapfeka masiki kumeso pese patinenge tiri munzvimbo dzeveruzhinji uye tichishamwaridzana nevanhu vari kunze kwedzimba dzedu.
Ikozvino kune humbowo hwakakura hwekuti kupfeka kwakaringana uye kunoenderana kwemachira ejira kana chimwe chakavhara kumeso kwakakodzera pamusoro pemhino nemuromo ndiyo nzira yakanakisa yekudzivirira kutapurirana kwehutachiona kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe.
Chishandiso chechitatu chatinofanira kurwisa mutsauko mutsva ndicho chakachipa uye chakanyanya kuwanda: mweya mutsva.
Izvi zvinoreva kuti tinofanira kuedza nepatinogona napo kuva panze patinosangana nevanhu vasiri vomumba medu.
Patinenge tiri mumba mune vamwe vanhu, kana kuti mumotokari, mabhazi uye matekisi, tinofanira kuchengeta mahwindo akavhurika kuti tive nechokwadi chokuti mweya unogona kuyerera zvakasununguka munzvimbo yacho.
Chishandiso chechina chatinofanira kurwisa mutsauko mutsva kudzivirira kuungana, kunyanya kuungana kwemukati.
Kuungana kwevanhu vakawanda semisangano mikuru nemisangano, kunyanya idzo dzinoda kuti vanhu vakawanda vave pedyo nepedyo kwenguva refu, dzinofanira kuchinjwa kuita mafomati chaiwo.
Mapati ekupera kwegore nemarave ekupera kwegore kwematric pamwe nemamwe mhemberero zvinofanirwa kumbomiswa, uye munhu wese anofanira kufunga kaviri asati apinda kana kuronga kuungana.
Iko kunoitika kuungana, ese anodiwa eCCID protocol anofanirwa kunyatsocherechedzwa.
Kwese kwese kwatinosangana nako kunowedzera njodzi yedu yekutapukirwa kana kutapurira mumwe munhu.
Sangano reNational Coronavirus Command Council rakasangana nezuro kuti ritarise kukwira kwehutachiona uye nekugona kuitika kweiyo Omicron musiyano.
Izvi zvateverwa nemisangano yePresident's Coordinating Council neCabinet, apo pakatorwa danho rekuti nyika irambe iri paCoronavirus Alert Level 1 pari zvino uye kuti National State of Disaster irambe iripo.
Mukutora danho rekusamisa zvimwe zvirambidzo panguva ino, takafunga nezvenyaya yekuti patakasangana nemafungu ehutachiona apfuura, majekiseni akange asingawanikwe zvakanyanya, uye vashoma vanhu vakabayiwa.
Hazvisisiri izvo. Majekiseni anowanikwa kune ani nani ane makore gumi nemaviri zvichikwira, mahara, kuzviuru zvesaiti munyika yose.
Isu tinoziva kuti vanodzivirira chirwere chakakomba uye kuchipatara.
Isu tinoziva zvakare kuti iyo coronavirus ichave nesu kwenguva yakareba. Saka isu tinofanirwa kutsvaga nzira dzekugadzirisa denda tichidzikamisa kukanganisa kuhupfumi uye nekuona kuenderera mberi.
Nekudaro, nzira iyi haigone kugadzikana kana tikasawedzera huwandu hwekudzivirira, kana tikasapfeka masiki, kana tikatadza kutevedzera hutano hwekuchengetedza hutano.
Tese tinofanira kuyeuka kuti maererano neAlert Level 1 mirau:
Pachine nguva yekudzoka pamba kubva na12 pakati pehusiku kusvika na4 am.
Hapana vanhu vanopfuura mazana manomwe nemakumi mashanu vanogona kuungana mudzimba uye havapfuure zviuru zviviri zvevanhu vanogona kuungana panze.
Ipo nzvimbo yacho idiki kwazvo kuti ikwanise kugarisa nhamba idzi nekwakakodzera kufambidzana munharaunda, saka hapangapfuuri makumi mashanu muzana enzvimbo inogona kushandiswa.
Hapana vanhu vanopfuura zana vanobvumidzwa pamariro, uye kusvinura kwehusiku, kuungana kwemashure, uye 'kuungana kwemisodzi hakubvumidzwe.
Kupfeka masiki munzvimbo dzeveruzhinji kuchiri kusungirwa, uye kutadza kupfeka mask kana zvichidiwa kunoramba kuri mhosva.
Kutengeswa kwedoro kunotenderwa zvinoenderana nemamiriro erezinesi agara aripo, asi haagone kutengeswa panguva yenguva yekusvika pamba.
Tichanyatso tarisa huwandu hwehutachiona uye kuchipatara mumazuva anouya uye tichaongorora mamiriro acho mune rimwe svondo.
Tichazoda kuona kuti matanho aripo akakwana here kana kuti shanduko dzinoda kuitwa kumitemo iripo.
Takatanga hurongwa hwekugadzirisa mirau yedu yehutano kuti tikwanise kuongorora mashandisirwo emutemo weDisaster Management Act kugadzirisa mhinduro yedu padenda iri, nedonzvo rekusimudza National State of Disaster.
Tichashandisawo chirongwa chedu chekudzorera nyika kuitira kuti zvipatara nezvimwe zvivako zvekurapa zvakagadzirira mhepo yechina.
Isu tiri kutarisa nezvehutongi hwekiriniki hunoshanda, kutsvaga kutsvaga uye kuongorora, kuchengetedza kwakanaka kwekiriniki, kuwanikwa kwevashandi vehutano.
Kuti tive nechokwadi chekuti zvivakwa zvedu zvakagadzirira, mibhedha yese yechipatara yaive iripo kana kudiwa panguva yechitatu wave yeCCIDID-19 yakarongwa uye yakagadzirirwa yechina wave.
Isu tiri kushanda zvakare kuona kuti oxygen inowanikwa kumibhedha yese yakatemerwa COVID-19 kutarisirwa.
Isu ticharamba tichitungamirwa neWorld Health Organisation pakufamba kwenyika, iyo inopa zano pamusoro pekuvharwa kwemiganhu.
Kufanana nedzimwe nyika zhinji, isu tatova nemaitiro ekudzora kupinza kwezvakasiyana kune dzimwe nyika.
Izvi zvinosanganisira zvinodiwa kuti vafambi vaburitse chitupa chekudzivirira uye bvunzo isina kunaka yePCR inotorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekufamba, uye kuti masiki anopfekwa panguva yekufamba.
Takaodzwa mwoyo zvikuru nesarudzo yenyika dzakati kuti yekurambidza kufamba kubva kune dzinoverengeka nyika dzeSouthern Africa zvichitevera kuzivikanwa kweOmicron musiyano.
Uku kubuda kwakajeka uye kusingakodzeri zvachose kubva mukuzvipira kwakaitwa nevakawanda venyika idzi pamusangano wenyika dzeG20 muRome mwedzi wapera.
Vavimbisa pamusangano uyu kuti vachatangazve nzendo dzekunze kwenyika zvisina njodzi uye zvakarongeka, zvichifambirana nezviri kuitwa nemasangano epasi rose akaita seWorld Health Organisation, International Civil Aviation Organisation, International Maritime Organisation, neOECD.
G20 Rome Declaration yakacherekedza dambudziko rechikamu chekushanya munyika dzichiri kusimukira, uye yakazvipira kutsigira "kukurumidza, kusimba, kubatanidza uye kwakasimba kudzoreredza kwechikamu chekushanya".
Nyika dzakatemera nyika yedu zvirango zvekufamba uye dzimwe nyika dzedu dziri kuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira United Kingdom, United States, nhengo dzeEuropean Union, Canada, Turkey, Sri Lanka, Oman, United Arab Emirates, Australia, Japan, Thailand, Seychelles. , Brazil, uye Guatemala, pakati pezvimwe.
Zvirambidzo izvi hazvina mhosva uye zvinosarura nyika yedu nenyika dzedu dzekuchamhembe kweAfrica.
Kurambidzwa kwekufamba hakuudzwe nesainzi, uye hazvizove zvinobudirira mukudzivirira kupararira kwemutsauko uyu.
Chinhu chega chinorambidzwa pakufamba chichaita kuwedzera kukuvadza hupfumi hwenyika dzakakanganisika uye kudzikisira kugona kwavo kupindura, uye kupora kubva padenda.
Tinodaidza nyika dzese idzo dzakatemera zvirango zvekufamba munyika yedu nenyika dzedu dzekumaodzanyemba kweAfrica kuti vashandure sarudzo dzadzo nekuchimbidza uye vabvise kurambidzwa kwavakaisa kusati kwaitwa kumwe kukanganisa hupfumi hwedu uye kumararamiro evanhu vedu.
Hapana chikonzero chesainzi chekuchengeta zvirambidzo izvi zviri munzvimbo.
Isu tinoziva kuti hutachiona uhu, senge mavhairasi ese, hunochinja uye hunogadzira zvakasiyana.
Isu tinoziva zvakare kuti mukana wekubuda kwemhando dzakaomarara dzemhando dzakasiyana unowedzerwa zvakanyanya uko vanhu vasina kubaiwa.
Ndosaka takabatana nenyika dzakawanda, masangano, uye vanhu pasi rese vanga vachirwira kuwaniswa kwakaenzana kwejekiseni remunhu wese.
Takataura kuti kusaenzana kwekudzivirira hakungodhura hupenyu uye raramo munyika idzo dzinorambidzwa kuwana asi kuti zvinotyisidzirawo kuedza kwepasirese kukunda denda.
Kubuda kweiyo Omicron mutsauko kunofanirwa kunge kuri kumuka kupasirese kuti kusaenzana kwekudzivirira hakugone kubvumidzwa kuenderera.
Kusvikira munhu wese abaiwa nhomba, munhu wese anenge ari panjodzi.
Kusvikira munhu wese abaiwa, isu tinofanirwa kutarisira kuti zvimwe zvakasiyana zvichabuda.
Izvi zvakasiyana-siyana zvinogona kunyanya kutapuriranwa, zvinogona kukonzera chirwere chakanyanya, uye pamwe kurwisa majekiseni aripo.
Panzvimbo pekurambidza kufamba, nyika dzakapfuma dzepasirese dzinofanirwa kutsigira kuedza kwehupfumi huri kusimukira kuwana nekugadzira mishonga yekudzivirira yakakwana yevanhu vadzo pasina kunonoka.
Kubuda kweiyo Omicron musiyano uye kusimuka kwenyaya kwakaratidza pachena kuti tichafanirwa kurarama nehutachiona uhu kwenguva inotevera.
Isu tine ruzivo, tine ruzivo uye tine zvishandiso zvekugadzirisa denda iri, kutangazve akawanda emabasa edu ezuva nezuva, uye kuvakazve hupfumi hwedu.
Tine kugona kuona gwara richatorwa nenyika yedu.
Mumwe nemumwe wedu anofanira kubaiwa.
Mumwe nemumwe wedu anofanirwa kudzidzira mapuroteni ehutano sekupfeka masiki, kugeza kana kuchenesa maoko edu nguva nenguva, uye kudzivirira nzvimbo dzakazara uye dzakavharika.
Mumwe nemumwe wedu anofanira kutora mutoro wehutano hwedu uye hutano hweavo vakatikomberedza.
Mumwe nemumwe wedu ane basa rake.
Hatikundwe nedenda iri.
Takatotanga kudzidza kurarama nazvo.
Tichatsungirira, tichakunda uye tichabudirira.
Mwari ropafadzai South Africa uye vadzivirire vanhu vayo.
The World Tourism Network uye African Tourism Bhodhi yanga ichidaidzira kugoverwa kwakaenzana kweVaccine uye shanduko yekuvimbisa kuchengetedzwa kwendege dzepasi rose neCOVID019
WTN Inodaidza Global Vaccine Mandate uye Equal Distribution
WTN Nhungamiro: Maitiro ekufamba neNew Covid Strain Omicron?